कांग्रेस सांसदहरुले १५ दिनको पारिश्रमिक कोरोना रोकथाम कोषमा उपलब्ध गराउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कांग्रेस सांसदहरुले १५ दिनको पारिश्रमिक कोरोना रोकथाम कोषमा उपलब्ध गराउने
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संघीय संसद्‍मा रहेका सांसदहरुले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण उपचार कोषमा १५ दिनको पारिश्रमिक उपलब्‍ध गराउने भएका छन् ।
कांग्रेसका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले कांग्रेसका संघीय संसद्‍मा रहेका सांसदहरुले १५ दिनको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए । कांग्रेसका संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा ६३ र राष्ट्रिय सभामा ६ जना सांसद छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोगको संक्रमण फैलने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गरेको एक हप्ताका लागि देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको बताएको छ । प्रमुख सचेतक खाणले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय पालन गर्न सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
लकडाउनको अवस्थामा दैनिक श्रम गर्दै जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरुलाई जीवनयापनका लागि सहज रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
विषम परिस्थितिमा सबै एकजुट भई धैर्यताका साथ चुनौतीको सामना गर्न कांग्रेसले अपील गरेको छ ।
प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ १२:२५
चितवनमा आइसोलेसनमा रहेका एक बिरामीको मृत्यु, कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी
चैत्र ११, २०७६ रमेशकुमार पौडेल
भरतपुर — चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको कोरोना उपचार अस्थायी अस्पतालको आईसीयूमा रहेका एक युवकको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको छ । उनकाे 'थ्रोट स्वाब' परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । परीक्षणको नतिजा भने नआइसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।
वीरगञ्जका ३० वर्षीय युवक केही समयदेखि मिर्गौला, छाला र फोक्सोमा समस्या हुने लुपुस नामक रोगबाट पीडित थिए। ज्वरो र निमोनिया देखिएपछि आइतबार उनलाई कोरोना अस्थायी अस्पतालमा ल्याइएको थियो।
उनी हालसालै कतै विदेश नगएको उनको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। उनलाई वीरगञ्जबाट अस्पतालले रिफर गरी चितवन मेडिकल कलेज पठाएको थियो। कोरोनाको आशंका गरी मेडिकल कलेजले कोरोना अस्पताल पठाएको थियो।
‘उनी पहिलेदेखि नै लुपुस नामक रोगले पीडित रहेछन्। यसपाली ज्वरो र निमोनिया पनि देखिएपछि यहाँ ल्याइएको थियो,’ कोरोना नियन्त्रण कार्यदलका सदश्यसचिव डा. भोजराज अधिकारीले भने। डा. अधिकारीले ती युवकको स्वाबको नमूना परीक्षणका लागि सोमबार नै काठमाडौं पठाइएको बताए।
टेकु अस्पताल स्रोतले परीक्षणको नतिजा आउन केही समय लाग्ने बताएको छ । युवकको शवलाई अहिले अस्पतालमै सुरक्षित तरिकाले राखिएको छ।
प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ १२:२२